Baaritaanka jirdilka dadka magangelya-doonka ah oo aan xoog la saarin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Baaritaanka jirdilka dadka magangelya-doonka ah oo aan xoog la saarin
La daabacay torsdag 8 augusti 2013 kl 12.39
In ku dhow boqolkiiba soddon dadka magangelya-doonka ah oo Iswiidhen yimaada waxaa lagu qiyaasay in ay dhaawacyo ka soo gaaray jirdil loogu geystey dalalkoodii. Balse aqoon-darradi shaqaalaha caafimaadka oo dadkaas baara oo aad u weyn ayaa dhibaato laga la kulmaa sidii goor hore loogu ogaan lahaa dhaawacyadaas. Taasina waa dhibaato khatar ah. Sidaas waxaa tiri Eva Hall oo ka socota Laanqayrta Cas.
Sannadkii hore ayey hay’adda socdaalku dhabba-tus dadka magangelya-doonka ah u fududeynaya in loo diro khubaro soo baarta in dhaawacyadaasi ay yihiin kuwo ku yimid jirdil iyo in kale. Laakiin Eva Hall waxay sheegtay khubaro la’aantu ay tahay dhibaato aad u weyn.
Waxaa la qiyaasayaa in ay sannadkaan Iswiidhen yimaadaan dad magangelya-doon ah oo tiradoodu gaareyso 54000 oo qof. Sida la saadaalinayana haddii ay dhabowdo 18000 oo dadkaas ka mid ahi waxay yihiin kuwo jirdil loogu geystey dalalkoodii.